Ogaden News Agency (ONA) – Dad Lagu Laayay Kaniisad Dalka Masar Kutaala.
Dad Lagu Laayay Kaniisad Dalka Masar Kutaala.
Posted by ONA Admin	/ December 30, 2017
Sagaal ruux ayaa dhimatay markii rag hubaysan ay weerareen kiniisad ku taala koonfurta Qaahira, laakiin waxaa markiiba arrintan ka jawaabay booliiska, sida ay saraakiishu sheegeen.
Saddex ka mid ah dadka dhintay waxay ahaayeen booliis, kuwaas oo shaqo u joogay kaniisadda Mar Mina. Mid ka mid ah raggii weerarka soo qaaday ayaa la dilay, suun kuwa qarxa ah oo uu qabayna waa lakala furay, balse nin kale oo hubaysan ayay usuura gashay in uu goobtaasi ka baxsado.
Laamaha ammaanka ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay qorshe ay ku sugayaan ammaanka xilliyada loo damaashaadayo sannadka cusub iyo Ciida Qibdiyiinta. Waxaana talaabooyinkaas ka mid ahaa in la hawlgaliyo ciidammada xaaladaha deg degga ah ka jawaaba iyo qalabka lagu cunaqabateeyo isgaadhsiinta oo dhan.
Weerarkan ayaa u muuqda in uu ka dhacay markii booliis roondo ku samaynaya kiniisada ay arkeen labo nin oo u dhaqmaya si laga shakiyo. Weriyaha BBC-da ayaa ku soo waramaysa in suunka qarxa ee ninka la dilay laga helay uu tilmaamayo in la qorsheeyay weerar gaysta dhimasho intan ka badan.
Qibdhiyiinta Masar ayaa horay ugu eedeeyay xukuumada in ay tilmaantay oo kali ah in ay ilaalin doonto ammaankooda, arintaana ay xaalada uga sii dari karto. Masar Muslimiinta ayaa aqlabiyad ku ah Kiristaanka laga tirobadan yahay oo Qibdhiyiin u badana waxay bulshada ka yihiin 10%.